Qui installe une clim ? | Lyse Concept
Ingo shandisa tepi ye duct mukati mehwindo furemu pamwe chete nehwindo. Chengetedza jira rinoputika kune tepi yematepi. Wobva wavhura zipi woisa hose yeair conditioner yako kunze kwehwindo. Pakupedzisira, vhara uye simbisa zipper yakapoteredza pombi.
The caulking kit trick Ceci pourrez vous intéresser : Quel niveau sonore pour un climatiseur ?.
Chenesa chimiro chehwindo rako zvakanaka, izvi zvinobvumira kunamatira kuri nani kwekiti (kazhinji nependi tepi). …
Kana hwindo rako ranyatsocheneswa, unogona kuenderera mberi nekuisa tepi yeVelcro, yakatenderedza hwindo rako.
Nzira yekuisa sei air conditioner pipe? Isa mudziyo wako pedyo nehwindo, panzvimbo yakatwasuka, muimba yaunoda kuiisa. Batanidza hose yekuburitsa mweya kune inotakurika air conditioner woiisa panze, nepahwindo rako. Vhara hwindo zvakanyanya sezvinobvira.
A monobloc mobile air conditioner inofanira kuiswa pedyo negonhi kana hwindo kuti ibudise mhepo kunze kuburikidza nekubuda kwemhepo. A voir aussi : Comment reconnaître un bon climatiseur ?. Nekudaro, kudzikamisa kupisa / kutonhora kurasikirwa zvakanyanya sezvinobvira, zviri nani kuboora gomba (10 kusvika 15 cm) mumadziro kuti pombi ipfuure.
Zvinofanira kuiswa pamwero pasi kuva nechokwadi chokuti hapana zvipingamupinyi mukati 50 masendimita (zvichienderana mudziyo muenzaniso) kumativi mudziyo, uye kuti iri pedyo kunobva imwe redunhu simba.
Kuisa inotakurika air conditioner caulking kit haigone kuve nyore. Iwe unongofanirwa kuve neVelcro tepi kutenderedza kuvhura, kwaunogona kukwenya jira ne zipper. Sur le même sujet : Quel climatiseur pour une maison de 100m2 ?. Saka, kana iwe ukavhara zip, kuvhura kwehwindo kunongoerekana kwakonzerwa.
Comment installer un climatiseur dans une fenêtre à battant ?
Iyo yakapfava, uye yakachengeteka, ndeye kungoshandisa maviri 3/4 plywood mapaneru ayo anozosimbiswa kumucheto kwehwindo furemu, kunge greenhouse. Saka isu tinoisa iyo air conditioner panzvimbo, uye ne tepi chiyero, tinotora zviyero kuti ticheke mapaneti maviri kuti ayere.
Nzira yekubvisa sei pombi yemhepo inofefetera kunze? Kana iwe uchida kunyatso bvisa mhepo inopisa, iwe uchafanirwa kugadzira yekubuda mumadziro kana mukuvhura. Ingave yegonhi kana hwindo, iwe muzviitiko zvese unofanirwa kuboora kunze kuti upfuure sheath.
Kuisa inotakurika air conditioner caulking kit haigone kuve nyore. Iwe unongofanirwa kuve neVelcro tepi kutenderedza kuvhura, kwaunogona kukwenya jira ne zipper. Saka, kana iwe ukavhara zip, kuvhura kwehwindo kunongoerekana kwakonzerwa.
Kuti ubvumire kupisa kunotorwa nemhepo yako yemhepo kupukunyuka, unofanira kuisa pombi huru kunze kwekamuri kuti itonhodzwe. Kazhinji kazhinji mugadziri anopa muromo kana sisitimu inobvumira mweya unopisa kubuda nepahwindo kana musuwo.
Mobile air conditioners inobvisa mhepo inopisa kuburikidza negwara rinochinjika rinopfuura nepahwindo rakavhurika kana buri riri mumadziro, zvichiita kuti zvive zvakanyanya kushanda kupfuura mafeni ari nyore. Saka iwe unofanirwa kusiya hwindo rakavhurika (panjodzi yemhepo inopisa ichipinda mukamuri) kuti ubvise kupisaâ € ¦
Isu tinogovana newe zano redu rekubvisa iyo mobile air conditioning: ingo shandisa inotambanuka yekubvisa duct yedhayamita yakakodzera. Kureba kwayo kunofanira kuva kupfupi sezvinobvira. Inowanzo kupihwa nemudziyo.
Comment vider un air climatisé portatif ?
Iyo drain hose inobatanidza zvakananga kune inoyerera yekubuda kweiyo mobile air conditioner. Kudurura mvura, ingoitungamirira pasi. Mvura inobva yayerera yakasununguka ichipinda mumudziyo wekuunganidza. Kana mvura yose yapera, bvisa hose yekudhonza.
Paunenge uri muroja Kuiswa kwemhepo inotonhorera kunoenderana nechibvumirano chakanyorwa chemuridzi-mudiki, nekuti inoshandura chivako. Kana akabvumidza kuisirwa, wekupedzisira anofanira ipapo: kuwana mvumo inodiwa kana imba yacho iri mumuridzi wevamwe; gadzirisa zvinyorwa.
Nzira yekuisa sei air conditioner mumba?
A mobile air conditioner inofanira kuiswa pedyo nehwindo kana musuwo unotsvedza, kuitira kuti ubudise mhepo kune kunze nekuda kwepombi inopihwa (iyo exhaust duct). Kunyange zvakadaro, zviri nani kuchera gomba mumadziro ane gomba saw, yehupamhi hwakafanana nepombi, kuitira kuti ipfuure.
Ndekupi kwekuisa pombi yekudhonza yeair conditioning? Zvinofanira kuiswa pamwero pasi kuva nechokwadi chokuti hapana zvipingamupinyi mukati 50 masendimita (zvichienderana mudziyo muenzaniso) kumativi mudziyo, uye kuti iri pedyo kunobva imwe redunhu simba.
Iyo drain hose inobatanidza zvakananga kune inoyerera yekubuda kweiyo mobile air conditioner. Kudurura mvura, ingoitungamirira pasi. Mvura inobva yayerera yakasununguka mumudziyo unounganidza. Kana mvura yose yapera, bvisa hose yekudhonza.
Sezvo iine chinotonhodza, inofanira kusiiwa ichimira kweanenge maawa makumi maviri nemana isati yaipinza.
PrevPreviousComment climatiser plusieurs pièces ?
NextComment passer une délégation de service public ?Next